DHAGEYSO:Madarasooyinka waqooyiga Mandera oo loo uruuriyay in ka badan 34 milyan oo shilin | Star FM
Home Wararka Kenya DHAGEYSO:Madarasooyinka waqooyiga Mandera oo loo uruuriyay in ka badan ...
DHAGEYSO:Madarasooyinka waqooyiga Mandera oo loo uruuriyay in ka badan 34 milyan oo shilin
Waxaa magaalada Nairobi gaar ahaan maqaaxida Redcourt lagu qabtay xaflad lacag dhan 34,560,900 oo shilin loogu uruuriyay madarasooyinka deegaan baarlamaneedka waqooyiga Mandera.
Barasaabka ismaamulkaasi Cali Ibraahim Roba oo munaasabaddan marti sharaf ka ahaa ayaa sheegay in laga soo gudbay waayihii lagu tiirsanaa deeq bixiyaasha si ay u dhisaan xarumaha diimeed.
Waxaa xafladda lacag uruurinta ka qayb galay siyaasiyiin hadda xilal haya , kuwo hore , ganacsato iyo culimaaudiin.
Guddoomiyaha Mandera iyo xildhibaanka waqooyiga dowlad deegaankaas Bashiir Cabdullahi ayaa u mahadceliyay cid kasta oo wax la baxday.
Cali roba ayaa ku dhawaaqay lacagta halkaasi laga uruuriyay
Dhanka kale xoolo dhaqatada ku nool waqooyiga dalka ayaa loogu baaqay in ay nabadda ku dadalaan oo ayna garab siiyaan dadaallada saraakiisha ammaanka si looga adkaado kooxaha gaysta falal dambiyeedyada.
Previous articleMali oo laga saaray dalladda dhaqaale ee ECOWAS
Next articleRa’isulwasaaraha Soomaaliya oo lagu wado in loo Gudbiyo Xubnaha lagu Muransan yahay ee Gudiga doorashada.